Momba anay - Guangzhou Asiaprint Industrial Co., Ltd.
Niorina tamin'ny 2016, Guangzhou Asiaprint Industrial Co., Ltd. dia nanjary mpitarika ny haitao fanindriana hafanana press. Manome milina famindrana hafanana izahay, milina fanonta sublimation, milina fanontam-pirinty DTF, milina fanodinana, masinina embossing, fanamainana, taratasy fanoratana, ranomainty sns. Any Guangzhou, Sina, manao fifehezana kalitao sy fitiliana eto izahay alohan'ny fandefasana entana hahazoana antoka fa mihaona ny vokatra ny fenitry ny mpanjifanay.
Fantatray fa tena ilaina ny serivisy feno. Omena torohevitra ny mpanjifa hanampy azy hisafidy milina marina amin'ny tetibola. Ny fanampiana ara-teknika an-tserasera dia azo omena ara-potoana ary faly ny mpiasa manampy anao. Injeniera vonona hampiasa milina fanompoana any ampitan-dranomasina. Voamarina amin'ny CE isika.
Manaiky kaomandy kely izahay, kaomandy OEM sy ODM. Ny milina fanontam-pirinty hafanana namboarina dia ho faly noforonin'ireo injenierantsika efa za-draharaha.
Manantena ny hihaino anao izahay!
Guangzhou Asiaprint Industrial Co., Ltd. dia nifantoka tamin'ny milina fanontam-pirinty, milina famindrana hafanana, horonan-tsarimihetsika fanodinana hafanana, milina fanamasinana, milina fanodinana hafanana lehibe, milina fanamafisana ho an'ny lamba mandroso. Manana traikefa mihoatra ny 19+ taona mahery izahay no mamolavola, manamboatra, mametraka ary mitazona milina indostrialy vaovao. Manamboatra fitaovana fanaovan-gazety izahay ary manamboatra tsipika famokarana.
Ny kalsioma fanaovan-tseraseran'ny Asiaprint dia misy amin'ny haben'ny amponga sy ny sakan'ny asa samy hafa, miankina amin'ny fampiharana. Ny milina sy ny tsipika dia azo alefa manara-penitra na vita amin'ny fomba namboarina tanteraka.
Ity karazana milina fanontam-pirinty ity dia natao ho an'ny fanontana pirinty ny lamaody, fanaka lamba, tsy tenona, fanatanjahan-tena, Jersey, kitapo, pad mouse ary vera sns.
Ny milina fanontam-pirintintsika rehetra dia manana mari-pankasitrahana Eoropeana CE, tatitra SGS.
Nahazo ny Assemble Report avy any Alibaba izahay, ary ekena ho mpamatsy voamarina.
Nandritra ny am-polony taona maro, misaotra ny mpivarotra na ny mpaninjara eto amin'izao tontolo izao, manana vokatra famintinana izay malaza amin'ny tsena na firenena sasany. Amerika Avaratra, atsimo Amerika, Azia, mpivarotra faritra afovoany atsinanana dia hita any amin'ny firenena sasany, toa ny, USA, Mexico, Thailand, Iran.
Nahazo tombony tamin'ny serivisy OEM an'ny orinasa, ny ankamaroan'ny mpanjifa dia mamorona sy manaraka ny fironany. Izany hoe, isika sy ny mpamolavola antsika dia mifamatotra amin'ny fironana famolavolana ankehitriny ary manandratra ny hevitsika hamoronana mba hanomezana izay mety modely mety any amin'ny firenena tsirairay.
Manantena ny hihaona amin'ny mpanjifantsika izahay ary handre tolo-kevitra momba ny fomba hanohizanay hanatsara ny vokatray hanatsarana ny fahombiazan'ny mpanjifanay.
Ataontsika lohalaharana ao an-tsaintsika io hevitra io hatrany am-piandohan'ny fampandrosoana ny vokatra amin'ny alàlan'ny fandefasana ary raha mbola manome serivisy ho an'ny mpanjifantsika izany vokatra izany.
Zava-dehibe ny teninao! Zava-dehibe ny hevitrao!
Izahay dia vondron'olona manana dingana tanteraka avy aminao mividy hampiasaina. Azonao antoka fa ny fanoloran-tenanay dia tsy ny hivarotra fitaovana fotsiny fa ny hametraka fitaovana, hampiofana mpiasa ary hampianatra hatrany ny mpanjifantsika manerana an'izao tontolo izao.
Ny fiantohana anay dia misy 1 taona amin'ny faritra ankapobeny rehetra.